Nhau - Tarisiro yesimbi indasitiri muHebei Province Dunhu Rezvekuvandudza Nzvimbo
Nekuda kushandira kuvhura mamiriro matsva epamusoro-soro ekuvandudza indasitiri mudunhu medu, munaKurume 24, boka rinotungamira redunhu redu rakaita ongororo yemunda kumasangano anoenderana nemaindasitiri, masangano ekutsvagisa, mabhizinesi ekutanga uye eindasitiri masumbu muHebei Provincial Economic Development Zone, uye vakakurukura zvakadzama nezvekuona kwemaindasitiri esimbi. (Director Wang kubva kurudyi wekutanga, maneja mukuru Yang Haixiang kubva kurudyi rwechipiri)
Panguva yekushanya uku, VaWang naVaLiang, pamwe naYang Haixiang naWang Zenghui, maneja maneja maneja wekambani yedu, vakaita nhaurirano panzvimbo yekuona yepamusoro kuronga kwekuvandudza kwemaindasitiri enzvimbo pamwe ne mamiriro azvino ekudzivirirwa kwezvakatipoteredza, kushambadzirwa kwemusika uye kudiwa, bhizinesi michina nhanho uye tarisiro yekusimudzira yedunhu redu.
Wang Zenghui, maneja mukuru wekambani yedu, akaratidzira vatungamiriri vematunhu edu akakwana ekuchengetedza nzvimbo uye yepamusoro silica sol yekugadzira tekinoroji, ndokusvika mukubvumirana pamwe nekurumbidzwa kwechikwata chinotungamira. General maneja Wang akataura kuti parizvino iri kukura munzira yekuchenjera uye girini. Izvo zvinodikanwa kusimudzira kubatanidzwa kweiyo nyowani tekinoroji uye yechinyakare kukanda tekinoroji uye kusimudzira kwemhando yepamusoro kuvandudza kweiyo foundry indasitiri.
(Mufananidzo kuruboshwe 1, maneja mukuru Wang Zenghui)